Yangu Freakonomics - Sevha Bhajeti Yako neMitengo Iri nani Martech Zone
Chipiri, July 25, 2006 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Ndichangopedza kuverenga Freakonomics. Yange yave nguva kubva pandakatadza kuisa pasi bhuku rebhizinesi. Ndakatenga bhuku iri Mugovera manheru ndokutanga kuriverenga neSvondo. Ndakaipedza maminetsi mashoma apfuura. Ndinobvuma kuti zvakatotora mamwe mangwanani, zvichindinonotsa kubasa. Pakati pebhuku iri maonero akasarudzika ayo Steven D. Levitt inotora paanoongorora mamiriro ezvinhu.
Izvo zvandinoshaya muhungwaru, chiperengo uye girama - ndinonyanya kushinga pakuedza kutarisa dambudziko kubva mumaonero ese ndisati ndatsigira mhinduro. Nguva dzakawandisa kupfuura kwete, mumwe munhu anotoburitsa mhinduro kwayo apo ini ndichitsvaga ruzivo rwakawanda uye rwakawanda. Kubva ndichiri mudiki, baba vangu vakandidzidzisa kuti zvinonakidza kutarisa zvese sepamoyo pane basa. Kune kukanganisa dzimwe nguva, ndiwo maitiro andinoita basa rangu seSoftware Chigadzirwa Maneja. 'Yakajairika Huchenjeri' inoita kunge huchenjeri hwemukati wekambani yedu. Kune chikamu chikuru, vanhu 'vanofunga' ivo vanoziva izvo zvinodiwa nevatengi uye kuyedza kugadzira mhinduro kwayo. Chikwata chatamisa iko zvino chiri kubvunza nzira iyoyo uye ichinyatsorwisa nyaya nekutaura kune vese vane chekuita, kubva pakutengesa kusvika kutsigiro, kubva kune vatengi kuenda kuimba yedu yebhodhi. Maitiro aya anotitungamira kumhinduro dzinova mukana wemakwikwi uye sangana nevatengi vedu vane nzara yezvinhu. Zuva rega rega idambudziko uye shandira kugadziriso. Iri ibasa rakakura!
Wangu mukurusa wega 'Freakonomics' yakaitika pandakashandira pepanhau kumashure kuEast. Ini handisi mune zvakadaro pamunhu nemunhu akangwara saVaLevitt; zvisinei, isu takaita ongororo yakafanana uye takauya nemhinduro yakaratidza hungwaru hunowanikwa nekambani. Panguva iyoyo, takanga tine vanopfuura mazana matatu venguva-yenguva vanhu vasina mabhenefiti uye vazhinji paashoma mubairo kana pamusoro chete. Shanduro yedu yaityisa. Mumwe nemumwe mushandi aifanira kudzidziswa nemumwe mushandi uye zvakatora mavhiki mashoma kusvika padanho rinobudirira. Isu takatsvaga pamusoro pedata tikaziva kuti (hazvishamise) kuti paive nekuenderana kwehupenyu hurefu kubhadhara. Dambudziko iri nderekuwana iyo 'inotapira nzvimbo'… vachibhadhara vanhu mubairo wakaringana uko kwavakanzwa kuremekedzwa, nepo vachiona kuti mabhajeti haana kubhurwa.
Kubudikidza nekuongorora kwakawanda, takaona kuti kana tikashandisa $ 100k kuti titore madhora mazana maviri emadhora ekuwedzera mari yemubhadharo yeawavhita, mutero, kudzidziswa, nezvimwe. vanhu vanofara! Isu takagadzira dhiredhi sisitimu yekuwedzera mibairo iyo yese yakasimudza yedu yekutanga mubhadharo pamwe nekubhadhara wese mushandi mubazi. Pakange paine vashoma vevashandi vaive vaburitsa huwandu hwavo uye vasina kuzogashira zvimwe - asi isu takanzwa kuti vakabhadharwa zvakaenzana.
Mhedzisiro yacho yainge yakanyanya kudarika zvatainge tafungira. Isu takapwanya kuchengetedza inosvika $ 250k pakupera kwegore. Chokwadi chaive chekuti kudyara mumihoro kwaive nemhedzisiro yatange tisina kufanotaura. Nguva yekuwedzeredza yakadzika nekuda kwekuwedzera kwekugadzirwa, isu takachengetedza toni yemitengo yekutarisira uye nguva nekuti mamaneja akapedza nguva shoma yekuhaya uye kudzidzisa uye yakawanda nguva yekugadzirisa, uye hunhu hwese hwevashandi hwakawedzera zvakanyanya. Kugadzira kwakaramba kuchiwedzera apo edu emunhu mitengo akaderedzwa. Kunze kwechikwata chedu, munhu wese aikwenya misoro yake.
Icho chaive chimwe chezviitiko zvangu zvinodadisa nekuti ndakakwanisa kubatsira vese kambani nevashandi. Vamwe vevashandi vakanyatsofara boka revatungamiriri mushure mekunge shanduko dzatanga kushanda. Kwenguva pfupi, ini ndaive Rock Star yeVanoongorora! Ndakave nemamwe mashoma akakunda muhondo yangu yebasa, asi hapana chakaunza mufaro wakaitwa naiyeyu.
Jul 26, 2006 pa 6: 58 AM
Ini ndichangopedza Freakonomics pachangu mavhiki mashoma apfuura. Kunakidzwa nekuverenga kuti waive sei neyako chaiyo-nyika Freakonomics nyaya.
Jul 27, 2008 pa 8: 21 AM
Zvinoshamisa kuti munhu anogona sei kutora bhuku rinonyanya kubatsira uye rinonzwisisika asi achirishandisa kuhupenyu hwavo nenzira yekutamba
zvinondiyeuchidza nezve intro economics kosi yandakatora rimwe zhizha
Paive nemumwe mukadzi wepakati nepakati akatora iyo kosi yekuzvifadza neake anonzi njere
Kunyangwe yaive nyaya yei yaaifanirwa kune vese kuendesa musoro wenyaya kuhupenyu hwake uye nemabatiro aaiita iye nemhuri yake muhupenyu hwavo hwemari uye hwekunyama.
Jul 27, 2008 pa 11: 30 AM
Maonero anonakidza. Ini ndanga ndisiri kuyedza kusimbisa yangu 'njere' nebhuku. Chero ani anondiziva anoziva kuti ndiri mukomana wenguva dzose. Ndinovimba unonamira uye woverenga zvimwe zvishoma usati waita chirevo chakapfupika.
Basa rebhuku ndere kuita kuti vanhu vafunge kunze kwekufunga kwakajairika. Muenzaniso wangu pamusoro waingove muenzaniso wekusimbisa zvisingaenderane nekufunga. Mazhinji makambani haatende kuti unogona kuchengetedza mari nekubhadhara vanhu zvakanyanya - akanaka mabhora uye basa rangu raive pamutsara waro.
Ndinodada nezvakawanikwa nechikwata changu patakaita izvi uye ndaida kugovana nevaverengi vangu.
Uye - hongu - ndinobvuma kubheja.